WordPress: Mgbake Ọdachi | Martech Zone
WordPress: Mgbake Ọdachi
Tọzdee, Eprel 5, 2007 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
The ikpeazụ ụbọchị ole na ole Anọ m na-arụ ọrụ iwe na iwebata ezigbo enyi m blog Pat Coyle. (Oge ezumike m na-aga n'ihu na-adọrọ mmasị karị - taa, ọ na-ada ntakịrị ntakịrị na Eprel! Ihe ọ bụla mere Global Warming?)
Achọrọ m ịkọ ihe merenụ wee tụlee usoro mgbochi nke m weere yana etu esi degharịa ya.
Nke a bụ ihe merenụ:
A DNS ihe nkesa gara na fritz. A DNS nkesa na-asụgharị okporo ụzọ na-abata na ngalaba aha ma webata ya na sava kwesịrị ekwesị. Na nke a na - eme, ọ gbaghaara ụzọ 2 nke iji ekwurịta okwu - ngalaba aha na saịtị ahụ na saịtị ahụ na nchekwa data (nchekwa data ya dị ugbu a na gburugburu ebe obibi).
M gbagwojuru anya ihe site na ịgafe blọọgụ ya na ihe nkesa ọzọ, n'amaghị na enwere nsogbu DNS. Nke a na-agbakwunye ọkwa ọzọ nke mgbagwoju anya. Okwuntughe na WordPress (na ọtụtụ ngwa nchekwa data ndị ọzọ) bụ ihe ezoro ezo nke ihe nkesa na ha nọ. Ọ bụrụ n ’ibugharị saịtị ahụ gaa na ihe nkesa ọzọ, ị nwere ike iwepu ikike i nwere iji kọwaa paswọọdụ ahụ. Obi dị m ụtọ, WordPress (ọzọ dị mma) nwere usoro mgbake paswọọdụ ebe ị nwere ike ịtọgharịa paswọọdụ gị site na njikọ dị na email.
Nke a bụ ihe m mere ozugbo:
Tupu nke a emee, m ga-ekwu na mụ na ụlọ ọrụ websaịtị dị egwu na-eme nkwado ndabere zuru ezu. Enwebeghị m nsogbu na ha enweghị ike idozi site na nkwado ndabere. Anụla m nrọ ọjọọ site na ndị ọzọ na blọọgụ ha na saịtị ha. Enweghị m ike iche n’echiche ihe ịgabiga ebe ahụ. (Denye aha na ndepụta RSS m ma ị nwere ike nweta akwụkwọ ego maka afọ efu na ndị ọbịa m).
Enwere m ike ịbanye na Web Server site FTP ma weghachite ma saịtị ahụ na nchekwa data. Akụkụ ọzọ nke ngwugwu ngwugwu m bụ na m nwere ike ịnweta dum VDS gafee websaịtị ahụ. MySQL na-echekwa ọdụ data na ndekọ faịlụ (/ var / lib / mysql /). Enwere m ike ibudata ọdụ data naanị site na ị copomi ndekọ mpaghara. Na-ekwu maka nnukwu nkwado ndabere! Enweghị mbubata, enweghị mbupụ, enweghị oke nha faịlụ iji mesoo… naanị FTP.
Ugbu a, enwere m saịtị ahụ na ebe nchekwa data dị na mpaghara, m kuru ume. A sị na m kwụsịrị ebe a ma nwee ndidi, nsogbu DNS ga-arụ ọrụ ya na Pat gaara alaghachi ngwa ngwa. M kwupụtara na ngalaba Aha ka na-arutu aka na ihe kwesịrị ekwesị Aha sava m usu tinye n'ọrụ Whois.net. Ọ bụrụ na ịlele ngalaba gị ebe ahụ, sava aha ahụ dị na ala nke akụkọ ahụ.
Nke a mere ka m kwenye na enwere ike ịbanye ebe nrụọrụ ahụ. Ihe nkesa aha ahụ ziri ezi mana peeji nke na-abịa bụ ụfọdụ peeji dị egwu nke dị ka spam. Ejiri m Ndụ nkụnye eji isi mee tinye na Firefox iji hụ na anaghị ebutegharị m n'ezie - mbanye anataghị ikike nke ọtụtụ ndị na-ahụ. Ebugharị saịtị ahụ. Enwere m ike ịme ụfọdụ nchọpụta nsogbu ọzọ; agbanyeghị, esoro m onye ọbịa m banye tiketi nkwado ka ndị ọkachamara ha wee nwee ike ịmalite nyocha.
Iweghachi saịtị gị na akaụntụ dị iche ma ọ bụ onye nnabata:
M na-adịghị emelitere Pat ka ọhụrụ version nke WordPress 2.1, PHP, na MySQL ma, otú ahụ ka m kpebiri na ọ dịghị oge ka mma karịa ugbu a! M hichapụ akaụntụ ochie ya wee bido akaụntụ ọhụrụ. Enweghachi m ozi email ya ma tinye nchekwa data ahụ, WordPress 2.1 na Pat ọdịnaya:
ndekọ wp-ọdịnaya bulite ndekọ - nke a bụ ebe ihe osise gị niile ebugo.
wp-content plugins directory - niile gị plugins (mee nke a ikpeazụ ọ bụ ezie na ịnwere ike ịnwe mbipụta mbipute.
ndekọ wp-ọdịnaya gburugburu - isiokwu gị.
Enwere m olileanya na mwepụta WordPress n'ọdịnihu na akwụkwọ ndekọ aha 3 ndị a bụ mgbọrọgwụ akwụkwọ ndekọ karịa sub-directies. Ọ ga - eme ka nkwalite dịkwuo mfe! N'oge a, onye nnabata m achọtala nsogbu DNS wee gbanwee saịtị ahụ nke ọma. Chei! Ugbu a, peeji nke Pat na-abịa abịa na ozi nkwalite WordPress. M pịrị site iji kwalite nchekwa data na ọ nọ na azụ… fọrọ nke nta.
Cheta okwu nzuzo m kwuru maka ya? Ee, Pat enweghị ike ịbanye n'ihi ya. Okwuntughe ya anaghịzịkwa abawanye uru na nchekwa data nke ọma ka m wee nwee mgbazigharị ọzọ. Agara m banye na nchekwa data wee gbanwee adreesị ozi-e Pat na tebụl onye ọrụ na adreesị email m. M wee tinye n'ọrụ “Lost my Password” nke zitere onwe m ozi iji tọgharịa okwuntughe. Mgbe migigharị paswọọdụ, m banyere wee gbanwee adreesị ozi-e Pat.
Ma ugbu a, Pat abịaghachila! Hindsight bụ 20/20… ọ bụrụ na echere m na onye ọbịa m, a gaara edozi okwu ahụ. M gbagwojuru anya okwu a. Agbanyeghị, Pat si ugbu a kwalite ma na-arụ ụdị nke kachasị mma. Ọ dị m nwute na ọ nọrọ ogologo oge, n'agbanyeghị. Ọ dịghị ewe ogologo oge ịlaghachi azụ site na ụra, mana ọ bụ nsogbu na-adịghị mma! Ndo, Pat!
Ihe ndi mutara:
Gbaa mbọ hụ na ịnọnyere ndị ọbịa nwere nnukwu nkwado ndabere na mpaghara.
Weghachite saịtị na nchekwa data gị ma chekwaa ha na ebe nchekwa.
Ọ bụrụ na gị na ezigbo onye ọbịa nọrọ, tụkwasịrị ha obi ka ịchọta ma dozie esemokwu ahụ.
Ọ bụrụ na ịchọrọ, gaa na onye nnabata ma ọ bụ akaụntụ ọhụrụ ma ghọta otu esi eweghachi saịtị, nchekwa data, ma weghachite paswọọdụ gị.
Additionalfọdụ Ama ndị ọzọ
Naa ugbu a maka ngwa ngwa njikọ hasntanetị amụbawo manifolds. N'ezie, na ụwa a na-agagharị, nke ịntanetị, satịlaịtị ekwentị egosila na ọ bara uru. A bịa na ntanetị ịntanetị, ndị mmadụ ka nọ na nsogbu ma jụọ ikuku ịntanetị olee otú bara ezigbo uru maka ha. Karịsịa maka webmasters mkpa nke ikuku DSL abughikwa ajuju. Ọkachasị webmasters ndị a na-ahọrọ web imewe studio n'ihi na emebe na mgbe ahụ mkpa a na-agba ọsọ njikọ bulite ya. Dị ka a nzọụkwụ ọzọ a ngwa ngwa njikọ a chọrọ ke usoro nke ahịa search engine. Onye nwere Asambodo Microsoft nwere ike ijikwa nsogbu niile na ịkparịta ụka n'ingntanet nke njikọ ndị a.
Tags: wordpress ọdachi mgbake
Kiss Theory Ezi Ekele: Fivelọ ọrụ ise na-emebi akụ
Ala na-adị ndụ na 01: Border vs. Amazon Email Marketing